बैंकहरुको ऋणमा ब्याजदर घट्यो ! हेर्नुहोस् नयाँ ब्याजदर, कुन बैंकको कति? – Yess Khabar
१२ माघ २०७५, शनिबार १०:०८ January 26, 2019 by Yess Khabar
काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को दोस्रो त्रैमास सकिएसँगै बैंकहरूले ब्याजको आधारदर (बेसरेट) निर्धारण गरेका छन्।बैंकले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाअनुसार नयाँ आधारदर निर्धारण गरेका हुन्।बैंकहरुको आधारदर घटेसँगै ऋणको ब्याजदर पनि घट्छ। आधारदरलाई नै मध्येनजर गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण प्रदान गर्छन्। वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंर्कस संघले निक्षेपको ब्याजदर घटाएर भद्र सहमति गरेसँगै कर्जाको ब्याजदर घटाउन पनि बैंकहरुलाई दबाब परेको थियो।नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले निक्षेपको ब्याज घटेका कारण बैंकहरुको आधार दर पनि घटेको बताए। भने, ‘आधार दर तल आए(घटे) सँगै ऋणको ब्याजदर स्वभाविक रुपमा घट्छ।’ आधार दर जतिले घट्छ, त्यति नै ऋणको ब्याज घटाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधान छ।’
यता उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले आधार ब्याजदरमा सम्पत्तिको प्रतिफल ( रिटर्न अन एसेट) बापत शून्य दशमलब ७५ प्रतिशत घटाउन बैंकलाई परिपत्र गरेको थियो।यो निर्देशनपछि हरेक बैंकको आधार ब्याजदरमा शून्य दशमलब ७५ प्रतिशत विन्दुले घट्नु पर्ने हो। तर, वाणिज्य बैंकहरुले पुस मसान्त सकिएसँगै तय गरेको नयाँ आधार ब्याजदरमा केही बैंकले मात्र आधारदर घटाएका छन्। भने केहीको यथावट र केहीले थोरै वृद्धि गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनअनुसार आधार ब्याजदर परिवर्तन भएअनुसार सबै ऋणको ब्याजदर सबै बैंकहरुले समायोजन गर्नु पर्छ।तर, बैंर्कस संघले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेर आधार ब्याजदरबाट घटाइएको शून्य दशमलब ७५ प्रतिशत प्रिमियममा जोड्न पाउने माग गरेको हो। यसले पुराना ऋणीको ब्याजदर नघट्ने देखिन्छ।
कुन बैंकको आधार ब्याजदर कति?
पुस मसान्त सकिएसँगै वाणिज्य बैंकले नयाँ आधारदर सार्वजनिक गरेका छन्। हिमालयन बैंकले नयाँ आधार दर सार्वजनिक गरेको छ।बैंकले पुस मसान्तपछि ९ दशमलब ११ प्रतिशत आधारदर सार्वजनिक गरेको छ। उक्त आधारदरमा ५ दशमलब ७५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जनाएको छ। बैंकको असोज मसान्तमा आधारदर ९ दशमलब २२ प्रतिशत रहेको थियो।माछापुच्छ्रे बैंकले पुस मसान्तपछि आधारदर १० दशमलब ९९ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ। यसमा ३ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ऋण प्रवाह गरेको बैंकले जनाएको छ। बैंकको असोज मसान्तमा आधारदर ११ दशमलब २१ प्रतिशत रहेको थियो।
सिभिलको आधारदर पुस मसान्तसम्ममा ११ दशमलब ३१ प्रतिशत छ। यसमा २ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रदान गर्नेछ। बैंकको असोज मसान्तसम्म आधारदर १० दशमलब ९८ प्रतिशत रहेको थियो। बैंकको आधार दर बढेको छ।यता सिद्धार्थ बैंकको आधारदर पनि असोज मसान्तको तुलनामा थोरै बढेको छ। बैंकको पुस मसान्तमा आधारदर १० दशमलब ५९ प्रतिशत रहेको छ। असोज मसान्तमा आधारदर १० दशमलब ५८ प्रतिशत रहेको थियो।
एभरेष्ट बैंकले ८ दशमलब २२ प्रतिशत कायम हुने गरी पुस मसान्तको आधारदर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकको असोज मसान्तसम्ममा आधारदर ८ दशमलब ८० प्रतिशत रहेको थियो।साथै नेपाल एसबीआई बैंकको आधारदर ९ दशमलब ८२ प्रतिशत रहेको छ। असोज मसान्तसम्ममा बैंकको आधारदर १० दशमलब ४३ प्रतिशत थियो।
Prevके हाे दुर्लभ रगत ‘गोल्डेन ब्लड’? जुन विश्वमै जम्मा ४३ जनामा मात्र छ
Nextसमोसा पकाउन तताएको तेल पोखिएर शरीर डढेकी नाबालिकाको उपचार खर्च अभाव